ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် - စာရေးဆရာဟူသည် « Colorful People of Burma / Myanmar
ဤနေရာတွင် သတင်းစာဆရာဟူသော အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်ရန် သူတို့၏လုပ်ငန်း၏ သဘာဝအရ ပြဿနာ မရှိပါ။ အခြားသောလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ဥပဒေ၊ ဆေးပညာဆိုင်ရာတို့တွင် သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်၊ ထောက်ခံစာလက်မှတ်များစွာကို ပြနိုင်သည်။ ဥပမာ မည်သူမည်ဝါသည် အခြားလူတစ်ဦး၏ ဗိုက်ကိုခွဲခွင့်ရှိကြောင်း လက်မှတ်များကို ပြစရာရှိကြပါသည်။ စာရေးဆရာများတွင်ကော ဘယ်လိုလက်မှတ်တွေ ပြစရာရှိပါသနည်း? အချို့သော သူများတွင် အချို့သောမဂ္ဂဇင်းများမှ စာမူကို ပယ်လိုက်သည်ဟူသော အကြောင်းကြားစာများနှင့် ပုံမနှိပ်ရသေးသော စာမူများပြစရာရှိပါသည်။ ၄င်းတို့သည် စာရေးဆရာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်းအတွက် ဘယ်လောက်အထောက်အကူရှိပါမည်နည်း? သိမ်မွေ့သောမေးခွန်းတစ်ခုမှာ - စာရေးဆရာများနှင့် သတင်းစာဆရာများ အသင်းဝင်ဖြစ်ခြင်းသည် စာရေးဆရာဖြစ်ခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုရာ ရောက်ပါသလား? ဒီမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း အချို့လူများက စိတ်ပူနေကြပါသည်။
( ဘာသာပြန်သူ၏ မှတ်ချက် - မေမေက စာရေးဆရာ ဘာကြောင့် ဖြစ်ချင်သနည်းဟူသော မေးခွန်းလို မလိမ်မညာဘဲ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေဖို့ပြောပါသည်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် မလိမ်မညာဘဲ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေရလျှင် အောင်မြင်ကျော်ကြားသော စာရေးဆရများကို မြင်၍ သူတို့လိုဖြစ်ချင်သောကြောင့် ဟု ဖြေရပါမည်။ ဒီအဖြေကိုမေမေသိကြားလျှင် ဘာပြောမည်နည်း။ ဒါဆိုရင် မင်းဟာ စာရေးဆရာမဖြစ်ထိုက်ဘူး ဟုပြောမလား။ မင်းက မလိမ်မညာဘဲ မှန်မှန်ဖြေတတ်တာတော့ မဆိုးဘူးလို့ ပြောမလား။ မေမေက စာရေးဆရာဟူသည် ရယူခြင်းမဟုတ် ပေးဆပ်ရခြင်းလို့ ဆိုသော်လည်း ကျွန်တော်ကတော့ ဘာတွေရမည်လဲ ဆိုတာကိုပဲ တွက်ကြည့်နေမိပါတယ်။ (ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း))